Filtrer les éléments par date : lundi, 20 juillet 2020
lundi, 20 juillet 2020 21:22
Gabon: Sambany no nisy vehivavy notendrena ho Praiminisitra
Notendren’ny filoha Ali Bongo Ondimba ho praiminisitra lehiben’ny governemanta Rtoa Rose Christiane Ossouka Raponda. Sambany no nisy fanendrena vehivavy ho amin’izany toerana izany teo amin’ny tantaran’i Gabon.
56 taona ankehitriny Rtoa Rose Christiane Ossouka Raponda. Ny taona 2012 izy no niditra tao anaty governemanta. Efa minisitry ny tetibola izy, ary farany teo dia minisitry ny fiarovana.
Fanarenana ny toekarena sy sosialy noho ny Covid-19 no isany asa lehibe miandry azy.
lundi, 20 juillet 2020 21:05
Brezila: Eveka telo izao matin’ny Covid-19
Firenena isany mitondra faisana amin’ny Covid-19 i Brezila. 78 000 no efa namoy ny ainy noho io valanaretina io, mametraka azy ho firenena faharoa be maty indrindra manerantany aorian’i Etazonia.
Eveka Katolika miisa telo izao no matin’ity Covid-19 ity any an-toerana, anisan’izany i Mgr Henrique Soares da Costa, Evekan’i Palmares notendren’i Papa François ny taona 2014, nodimandry teo amin’ny faha 57 taonany.
Nafanafana ny toe-draharaha teto Andohan’Ilakaka androany, tapaka nandritra ny fotoana vitsy hatramin’ny fifamoivoizana tamin’ny lalam-pirenena faha-7.
Andian’olona maro no nidina an-dalambe naneho ny fanoheran’izy ireo ny nitifiran’ny miaramila tovolahy iray "tsy salama saina, tsy nanao aro-tava". Naratra mafy ity farany.
Nanao fanambarana ary nampita izany tamin'ny tambazotran-tserasera ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena nanasokajy ho « fihoaram-pefy » ny fikasihan-tanana ataon’ny miaramila sasantsasany, tahaka ny tany Toamasina sy Ilakaka, ary milaza fa « efa mandray fepetra hentitra hanasaziana azy ireo ».
lundi, 20 juillet 2020 20:11
Paierie Générale d’Antananarivo: Nohamafisina ny fahandriam-pahalemana
Nohanatevin’ny Tahirimbolam-panjakana ny isan’ireo Polisy izay misahana ny fahandriam-pahalemana, ny fandraisana, ny fanampiana ary ny fandaminana eny anivon’ny Paierie Générale d’Antananarivo (PGA) amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao.
Ny tanjona dia ny mba hanomezana fahafaham-po ireo Zokiolona sy ny mba ahafahana manaja ireo fihetsika rehetra hanakanana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19, indrindra fa mandritra ireo dimy andro voalohany ny fizarana fisotroan-dronono, fotoana izay mahabetsaka ny olona.
Marihina fa efa nisy hatramin'ny ela ny fiaraha-miasa eo amin'ny Tahirimbolam-panjakana sy ny Polisy amin'ny fiarovana ny toeram-piasana sy ny fandaminana ihany koa ireo Zokiolona sy ireo mpisitraka.
lundi, 20 juillet 2020 19:04